A mpangataka vava vola aminy, | Apg29
A mpangataka vava vola aminy,
Moa ve ianao manaiky ho voafitaka sy voafitaka?
Ary ahoana no ahafantarantsika fa tena misy mpangataka izay miantso mafy sy manana azy io? Angamba tsara fanekena aoriana.
Omaly antsoina hoe romanianina olona ahy tsy misy fanomezana ny tenany. Izy ka niresaka avy hatrany ao tapaka soedoa, nefa mbola mazava tsara. Angamba dia namaky mialoha ny taratasy.
Raha misy olona tsy milaza ny anarany, dia mangataka iza izany. Fa tsy namaly fa nanohy niresaka. Nanomboka nilaza Sob hafa momba ny fianakaviany, narary izy ireo, homamiadana, ary nanana tena sarotra izany.
I haingana nahatakatra fa ny raharaha dia ny mangataka vola. Nanontaniako indray mandeha izay niantso ka nahazo c Mafy Hanavotra ny valin'ny anarana izay tsy azon'ny tsy mety hataony. Nanontaniako izay velona ka nisy nanambara tamin'i Romania.
Afaka mazava ho azy Soedoa, hoy aho, fa hoy izy tany Romania. Fa ny finday nanambara fa izy miantso avy any Soeda. Ataonareo hoe avy any Soeda, hoy aho, ary nanohy: mandainga ianao! Dia hoy izaho: veloma, ary nahantony.
Ilay lehilahy efa nilaza fa Kristianina, nefa efa fantatro izay romanianina mpangataka nipetraka teo ivelany ny toeram-pivarotana izy ireo nilaza ny Kristianina sy ny mpikambana ao amin'ny fiangonana isan-karazany any Romania, fa rehefa nisy teny manokana voalaza teo izany tsy Nanenjika.
Mazava ho azy, ny Kristianina iray manampy ny olona izay mahantra sy mila fanampiana, raha tianao, saingy aza manga maso sy tsotra loatra, ary manaiky ho ampiasaina fotsiny, satria Kristianina ianao, ary te-ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fiainana.
Raha ny marina, dia ny tsara tarehy hampangatsiaka ny hiantso an-trano ny Kristianina milaza izay mino an'i Jesoa ny mangataka (hamitaka azy ireo?) Ny vola. Izy ireo angamba efa surfed manodidina ny harato minomino foana mba hahitana ny Kristianina. Aho teo aloha nahazo mikorontana ny mpangataka. Ary ahoana no ahafantarantsika fa tena misy mpangataka izay miantso mafy sy manana azy io? Angamba tsara fanekena aoriana.
No ho telemarketers
Taloha, dia nanana fotoana mafy nanao hoe: tsy ny telemarketers izay te-foist ahy zavatra. Nahatsiaro ambany foana aho, rehefa ny toe-tsaina dia ny hoe vendrana aho aho ankapobeny izay tsy mahatakatra fa ny vokatra dia ny vintana izao tontolo izao fotsiny aho fa tsy Miss. Ary aoka ho resy lahatra ny tenako, ary nividy ny iray tamin'izy ireo, rehefa afaka izany, dia nahatsiaro ho ambakaina.
Fa ankehitriny dia lazaiko mivantana tsy misy tany izay tsy liana aho. Na izany aza anefa izy ireo manohy ny resaka mba miezaka ny handresy lahatra ahy, dia hijanona avy hatrany amin'ny mafy nefa sariaka veloma ary mihantona izy. Tsy manome azy ireo fahafahana.
Taloha, izany no nanome ahy ny feon'ny fieritreretana ratsy, nefa tsy intsony satria hahatakatra fa Izaho no ho hararaotina sy ny fijaliana. Lasa matanjaka kokoa aho ary manana be dia be kokoa ny fahatokiana ny manohitra an'i ity karazana zavatra.
Noho izany, dia tokony sahy hiteny hoe tsia. Aza avela hisy tsapanao ambany sarotra, raha hoy ianao no. Mafy orina eo amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny faharesen-dahatra ary fahasahiana be. Aza mahazo ampiasaina. Ary Kristianina ianao dia tsy ho lasa tsy Kristianina, raha hoy ianao no.
Omeo azy ireo i Jesosy!
Ahoana anefa no hanaovanao azy nangataka vola? Ao amin'ny toerana voalohany tokony hanome azy ny filazantsaran 'i Jesoa mba hahafahany mandray Azy mba ho voavonjy, ary voavonjy ho mandrakizay. Raha tsy izany, dia tsy mba hahazo ny sasany eo amin'ny fiainany.
Ao amin'ny toerana voalohany, dia manome ny mpangataka Jesosy! Lazaiko indray: Ao amin'ny toerana voalohany, dia manome ny mpangataka i Jesosy! Dia izy ireo ihany no handrava hiala beggary! Avy eo dia afaka manampy azy ireo fiaraha-monina.
Tsy i Jesosy, dia fanampiana ara-tsosialy tsy miasa! Noho izany, dia tokony hanome azy aloha i Jesosy, ary avy eo ny fanampiana ara-tsosialy-!